Ornagai English - Myanmar Mac Dictionary - Saturngod
Ornagai ကို Mac အတွက် update မလုပ်ဖြစ်တာ တော်တော်ကြာသွားပြီ။ နောက်ဆုံး Yosemite မှာ သုံးလို့ မရတော့ဘူးလို့ report လည်း လုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော် ပြန်ပြီး update လုပ်ထားပေးပါတယ်။
Dictionary ကို Download ချပါ။
Ornagai.dictionary file ရလာပါပြီ။
Ornagai.dictionary ကို ~/Library/Dictionaries/ ထဲတွင် ထည့်လိုက်ပါ။
Dictionary ကို enable လုပ်ဖို့ Mac က Dictionary App ကို ဖွင့်ပါ။ Menu က Preference ကနေ တဆင့် Ornagai ကို enable လုပ်ပေးပါ။
အခက်အခဲရှိရင် Comment ဖြစ်ဖြစ် MYSTERY ZILLION မှာ ဖြစ်ဖြစ် မေးနိုင်ပါတယ်။
Categorized as nothing Tagged mac, ornagai
library /Dictionaries ကို ဘယ်ကနေသွားရတာလဲ
Open Finder, Click GO on menu.
Click Go To …
finder ကနေ့ Go menu နိပ်တယ်…ဒါပေမယ့် library/Dictionaries မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒီထက်ပိုရှင်းအောင် ပြောပြလို့ရမလား ခင်ဗျာ…။ ကျနော် ရှာတာ ခေါင်းတောင်မူးသွားတယ်….user friendly မဖြစ်တာလည်း ပါပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။
You need to type. Check the pictures at below.
ဟုတ်ကဲ့ အကိုပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ခင်ဗျာ ဒါပေမယ့် CoreDataUbiquitySupport အဲဒါပေါ်လာတယ်။ UserDictionary ကိုပို့လိုက်တယ် ဒါပေမယ့် preference မှာမပေါ်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ folder အဆုံးထိဖြစ်တဲ့ sotre-UserDictionary.db အဲထိအထိလည်း မပေါ်ဘူးခင်ဗျာ။ restart လုပ်ဖို့လိုလားမသိဘူး။ ကျေးဇူးတင်လျက်။
~/Library/Dictionaries/ အောက်ထဲမှာ ထည့်ထားလား ? Zip ကော ဖြည်ပြီး ထည့်ထားရဲ့လား ?
တကယ်လို့ မရဘူးဆိုရင်တော့ ~/Library/Dictionaries/ အစား /Library/Dictionaries/ ထဲမှာ ပြောင်းထည့်ကြည့်ပါလား ?
/Libary/Dictionaries/ နဲ့အဆင်ပြေသွားတယ် အကိုရေ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဒီထက်မက ပညာများလည်း လေ့လာဆည်းပူး ပြန်လည်မျှဝေနိုင်ပါစေ။
ကွန်မက်အတိုင်း လိုက်သွားပေမယ့် Dictionaries က ပေါ်မလာသေးပါ။ အကြံပြုပါအုံး..
folder အသစ်ထုတ်ပြီးနောက် ရသွားပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ..
UNICODE အတွက် မရသေးဘူးလား
sorry didn’t support unicode
Thanks ပါ အကို ရသွားပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pingback: Ornagai data update on android and mac dictionary | Saturngod
ဟဲလို။ ကျွန်တော့် Macbook Air မှာ အထက်ကလို Install လုပ်ပြီး Preference မှာ
Ornagai Dictionary ရှာမတွေ့လို့ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူး ကူညီပါဦး။
kyaw se says:
i haven’t dictionaries in my mac library.
i already search.pls help me
You need to download and install it to your mac
Min Htaw says:
Sierra ပေါ်မှာ Library အောက် Dictionaries folder မရှိတော့ဘူး။ လုပ်မရတော့ဘူး ခင်ဗျ
if there is no folder, you can try to create it. But make sure, it’s under ~/Library/
Unicode version မထုတ်ဘူးလားအကို
ဆရာရယ် enable လုပ်မယ့်နေရာမှမရဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ ကူညီပေးပါအုံး…
where did you put the file ?
Don Nu says:
မသွားတတ်တော့ဘူးဆရာ မမှတ်မိဘူး…Library and dictionary လည်းမတွေ့ဘူး….အရမ်းငတာ..ဆရာရယ်ရှင်းအောင်ပြောပြပေးပါလား
ဆရာ.ကူညီပါအုံး…library တော့တွေ့ပြီ…ခက်တာက dictionaries မရှိဘူး…folder အသစ်လုပ်ပြီး ထည့်လဲမရဘူး…
Can you show with the screenshot please ? Or ask in mysteryzillion.org
ဆရာရယ်ဒေါင်းထားတယ် ဆက်သွားမရဘူး…Macbook air par…
ဘယ်လို ဆက်သွားလို့ မရတာလဲ ခင်ဗျ။
I put it to dictionary folder but ornagia is not appear in dictionary/preference.
scroll down and search it. It has big list for dictionary in MacOS Sierra.
Sist MInn Nyol says:
zip ဘယ်လိုဖြည်ရလဲ ဆရာ
you can do right click on file and extract.
Ye Marn says:
Hi.. everyone! I really appreciate to you all if one of you knows my problem with Facebook because I can’t read Myanmar font on my new posts.And I’m using my Facebook with safari.
for safari, you need to change fall back or remove all the myanmar unicode font from font book.
~/Library/Dictionaries/ မှာဖိုငျကိုထည့ျလိုကျတယျ။မရလို့ /Library/Dictionaries/ ကိုသှားပွီး Dictionaries လို့folderလုပျပွီ:ထပျထည့ျလိုကျတယျ။ အဲတော့မှ အဆငျပွသှေားတယျ။ ပထမတဈခုကို သှားဖကြျလိုကျရငျမရပွနျတော့လို့ နှဈခုစလုံးထည့ျထားမှပဲ အဆငျပွတေယျဗြ။
အကို macOS high Sierra10.13.6 သုံးလို့မရဘူးလား
အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဘာ ပြဿာ ရှိလို့လဲ ခင်ဗျ။
Mg Mighty says:
What’s font it is required?
unicode နဲ့ လုပ်ထားပြီး font embed ထည့်ထားပါတယ်။
Ornagaiကို downloadဆွဲလိုက်ပြီး installလုပ်ထားတယ်။ Dictionaryမှာ အင်္ဂလိပ်လို ရေးရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ မြန်မာလိုဆိုရင် အဆင်မပြေဘူး။ မြန်မာကနေ ဘာသာမပြန်နိုင်သေးဘူးလား ဒါမှမဟုတ် font issue လား။ ကျေးဇူးပါအကို
Ornagai ကို ဒေါင်းပြီး install လိုက်တယ်။ Mac Dictionaryမှာ Englishလိုရေးရင် အရမ်းအဆင်ပြေတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာလို ရေးရင် အဆင်မပြေဘူး ဘာမှမပြဘူး။ font issue ကြောင့်လား I use only zawgyi. Or can Ornagai not translate from myanmar yet?
yes. It doesn’t support yet.